बर्दिया प्रहरीद्वारा तपाईँको मास्क खोइ ? कार्यक्रम पुन: सञ्चालन « News24 : Premium News Channel
बर्दिया प्रहरीद्वारा तपाईँको मास्क खोइ ? कार्यक्रम पुन: सञ्चालन
बर्दिया । देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेका समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले तपाईको मास्क खोई ? कार्यक्रम पुन: सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले निषेधाज्ञा केहि खुकुलो गरेसंगै बर्दिया जिल्लामा पनि केहि दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुँदै गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले उद्योग वाणिज्य संघ बर्दिया लगायतका संस्थाको सहयोगमा तपाईको मास्क खोई ? कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
तपाईको मास्क खोई ? कार्यक्रम अन्तर्गत भिडभाड हुने बजार क्षेत्रमा प्रहरीहरू प्लेकार्ड, ब्यानर बोकेर चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरि रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका उपरीक्षक ईश्वर कार्कीले बताउनु भयो ।
उहाँले अन्य संघ सस्गालाई पनि यस अभियानमा जुट्न र सहयोग गर्न समेत अनुरोध गर्नुभयो । हात हातमा मास्क बोकेका प्रहरीहरु र उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसहित बजारमा मस्क नलागउनेलाई कोरोना संक्रमण रोकथामको बारेमा जानकरि दिने गरेको देखिन्छ । त्यस्तैगरी मास्क खरिद गर्न नसक्ने स्थानीयलाई समेत मास्क बितरण गरिएको छ ।
प्रहरीको अभियानमा यतिबेला उद्योग वाणिज्य संघले पनि सहयोग गरेको अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डेले बताउनु भयो । पछिल्लो समय बर्दियामा पनि संक्रमितको संख्या बढदै जादा दिनहुँ जसो प्रहरीले तपाईको मास्क खोई कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।